Chinongedzo Kune Iwo Mhando uye Maturu Ekutanga Kugadzira Pamhepo Vhidhiyo Makosi | Martech Zone
Kana iwe uchida kugadzira yepamhepo dzidziso kana yevhidhiyo kosi uye uchida inowoneka runyorwa rweese akanakisa maturusi uye marongero, ipapo iwe uchada uyu wekupedzisira gwara. Kwemwedzi yakati wandei yapfuura, ini ndakazviongorora uye kuyedza maturusi mazhinji, Hardware uye matipi ekugadzira dzidzo dzakabudirira uye makosi evhidhiyo ekutengesa paInternet. Uye ikozvino unogona kusefa iyi runyorwa kuti uwane nekukurumidza izvo zvaunoda zvakanyanya (pane chimwe chinhu kune ese mabhajeti) uye nekukurumidza kumhanyisa kuburitsa yako inotevera kosi.
Tarisa uone, tanga neiyo inokurudzira zvakanyanya uye uverenge kuburikidza nekuti ini ndakugadzirira chimwe chinhu chakakosha kwazvo kwauri, uye ini ndoda kuve nechokwadi kuti haucharasikirwa nechikonzero chero chipi zvacho.
Pamhepo Vhidhiyo Kosi Rekodha
Rudzi rwekutanga rwevhidhiyo iwe yauchazoda kugadzira yako kosi kana dzidziso ndeye kuratidza izvo zvaunoona pakombuta yako (masiraidhi, zvirongwa kana mawebhusaiti) uye utaure pairi nezwi. Nehunyanzvi ndizvo izvo zvinoda kushomeka kudyara, asi njodzi ndeyekuti kana iwe ukaita senge vanhu vazhinji vandinoona paYouTube, unozoguma wagadzira zvinouraya mavhidhiyo asina anombotarisa.
Ichi chikonzero nei zvichikosha:
Chengetedza iko kuzadzikiswa kwemasiraidhi
Shanda zvakanyanya pakushandisa izwi rako
Isa mifananidzo uye yakasarudzika mhedzisiro
Gadzira hutsinye hutsinye hwemabhureki uye zvikamu zvisina basa
RecordCast Chinovhara wezvaiitika
Nekure kure nyore uye izere software yekushandisa kune vanotanga. RecordCast Chinovhara wezvaiitika ine njere, inoratidzira-yakapfuma, uye 100% yemahara. Chero chaunoshandisa PC kana Mac, unogona kuzvidzora pakombuta yako zvakanaka sezvo iri padandemutande. Kunyangwe iri yemahara, haina watermark-yemahara, isina kushambadzira, uye yakakwira-tsananguro kurekodha. Haikwanise kushaikwa mubhokisi rako rekushandisa Uye zvakare, inopa yakavakirwa-mukati vhidhiyo mupepeti ine rakapfuma raibhurari yezvinhu, zvinyorwa, mifananidzo, kuputira, shanduko, uye akawanda anogadzikana ekugadzirisa maficha senge kupatsanura, zoom in / out, cheka, nezvimwe. avo vanoda kugadzira vhidhiyo makosi kana akapusa tutorials.
Saina Kuti UrekodheCast Yemahara
Loom yakanaka kana iwe uchida kugadzira anokurumidza mavhidhiyo, kunyanya nekupindura pamawebhusaiti kana software. Iyo inokutendera iwe kuti uzvinyorwe pachako paunenge uchitaura, uchipa madhairekisheni, uye kukuratidza iwe denderedzwa rakanaka kwazvo raunogona kuisa chero kwaunoona kwakakodzera. Zvakare zvinobatsira kwazvo kugovana makomendi evhidhiyo nekukurumidza pamwe nevamwe vako kana vatengi. Aakaundi account ndeye mahara uye zvakare vane bhizinesi uye bhizinesi zvinopihwa.
Saina Saina Kuti Uonekwe Mahara
Kana iwe ukashandisa Apple chishandiso, Sreenflow ndiyo mhinduro yaunoda: kurekodha dzidziso huru uye kuita semi-nyanzvi vhidhiyo yekugadzirisa. Kunyangwe izvi zvinhu zvemberi, zviri nyore kwazvo uye zvine hungwaru kushandisa, uye zvine mafirita akanaka ekuteerera nemavhidhiyo, uye mhedzisiro yacho yakanaka. Imwe-nguva marezinesi anotanga pa $ 129.
Dhawunirodha Muedzo weScreenflow
Microphones Zvemhando Audio
Iyo BOYA BY-M1 ndeye omnidirectional clip maikorofoni, yakanakira kushandiswa kwevhidhiyo, yakagadzirirwa mafoni, reflex kamera, vhidhiyo makamera, odhiyo rekodhi, maPC, nezvimwe. Iyo ine tambo yemamita matanhatu pakureba (iine 360 mm jack yegoridhe) kuti ibatanidzwe nyore nyore kumavhidhiyo makamera, kana mafoni akaiswa kwete padyo nemutauri. Mutengo: $ 6
The Sennheiser PC 8 USB inokurudzirwa kana iwe ukatenderera kwakawanda uye uchida kurekodha (kunyanya screencast) munzvimbo dzine ruzha rwekumashure. Icho chakareruka uye chinopa odhiyo yakanaka kune zvese zvakarekodhwa uye mumhanzi; maikorofoni, iri padyo nemuromo, inonzwisisika uye yakajeka mukuburitsa izwi nenzwi rekudzvinyirira. Yakashongedzerwa nemakrofoni mbeveve uye vhoriyamu kudzora pane tambo, inoshandawo zvakanyanya mumamiriro ekushanda akachenjera. Zviripachena, inogona chete kushandiswa kubatanidza kune PC / Mac uye kwete kune mafoni kana ekunze kamera. Mutengo: $ 25.02
Rode VhidhiyoMic Rycote
The Rode VhidhiyoMic Rycote maikorofoni yepfuti inobvumira iyo kuti igamuchire odhiyo nenzira yekunongedza pasina kutora ruzha rwemumativi. Saka, saka, inosungirwa sarudzo muOUTDOOR kupfura uko chidzidzo chinofamba zvakanyanya, chinowanzo shanduka (semuenzaniso, kana uine 2/3 vatauri) kana kushandisa maikorofoni ye lavalier haina kukurudzirwa nekuda kwezvikonzero zvekunaka. Iyo inogona kuiswa nyore nyore pane SLR kamera uye, ine maadapter e-smartphone, iwe unogona zvakare kuisanganisa iyo kumafoni kana mapiritsi ezvepasi-bhajeti kurekodha. Mutengo: $ 149.00
Yemahara Vhidhiyo Ekugadzirisa Software
OpenShot iri yemahara vhidhiyo mupepeti inoenderana neLinux, Mac, uye Windows. Inokurumidza kudzidza uye zvine simba zvine simba. Inokupa iwe nezvose zvakakosha mabasa ekugura uye kugadzirisa kune yako vhidhiyo, pamwe neyakaganhurirwa maturu, akasarudzika mhedzisiro, shanduko, inononoka-kufamba uye 3D mifananidzo. Yakakurudzirwa kana iwe uri kutanga kubva pakutanga uye uchitsvaga chimwe chinhu chakachipa uye chinokurumidza kudzidza.
FlexClip Vhidhiyo Mupepeti
Iyo iri zvachose online uye browser-yakavakirwa software. FlexClip Vhidhiyo Mupepeti inouya nezvose zvaunoda kuti ugadzire makuru mavhidhiyo, pasina ruzivo runodiwa. Rongedza zvikamu zvehukuru hwese zvakanangana mubrowser pasina kunetseka kwekukanda zvisina kukodzera. Kupererwa nemazano? Bhurawuza garari yemavhidhiyo akasarudzika akazara akagadzirwa nenyanzvi dzakagadzirirwa indasitiri yako. Vakafunga nezve wese munhu: kubva kumavhidhiyo eiyo YouTube chiteshi kusvika kudzidzo kana mavhidhiyo ekudzidzisa. Yakakura kana iwe uchida kuita nekukurumidza bvunzo.
Mutengo: freemium (yemahara kunze kwenyika chete mu480p, uye kubva 8.99 $ / mwedzi); Unogona kuenda ku AppSumo kuwana vhezheni yayo yehupenyu panguva ino.
Saina Saina FlexClip
Shotcut iri yemahara software, inoitiswa paLinux, macOS, uye Windows, yemahara uye yakavhurika-sosi, iyo inokutendera iwe kuti ugadzire mavhidhiyo, maneja uye nekuatumira iwo mumafomati mazhinji. Iyo interface inoshanduka uye inonzwisisika. Iyo mirairo yakarongedzwa zvakanaka, iine akawanda mafirita uye shanduko dzinoshanda. Yakasiyana-siyana, ine yakanaka yekudzidzira curve uye iri nyore kushandisa. Kakawanda kugadzirisa, kuunza maficha nyowani uye mashandiro, ichienderera nekuvandudza mashandiro ayo.
Iyo inopa yakakwana ficha yakatarwa senge yekutengesa software. Iyo inotsigira mafomati mazhinji nema resolution kusvika 4K. Inopa zvidzoreso zvemberi zvevhidhiyo uye odhiyo, mhedzisiro, nguva yekugadzirisa pamwe nekugadzirisa kwakawanda, uye tsika yekutengesa kunze ine huwandu hwakafanotaurwa.
Iko Kwekushambadzira Yako Online Course Vhidhiyo
Paunenge wagadzira mavhidhiyo ako, inguva yekuita kuti iwanikwe kune vateereri vako uye "uvabatanidze" kumasango (atinozokurukura muchikamu chinotevera) chaunoburitsa kosi yako yevhidhiyo. Ipapo ngatione patinogona kushambadzira edu epamhepo makosi.
YouTube - Haidi sumo nekuti ndiyo inotungamira chikuva muvhidhiyo yenyika. Iyo ine yakapusa interface, inokupa iwe yakanaka stats emamuvhi, uye kupfuura zvese, ndeye 100% yemahara. Iyo saka, saka, yakanaka mhinduro chete kana iwe usina bhajeti rekudyara kana uchida kukurumidza kutsikisa vhidhiyo. Chinhu chakashata ndechekuti YouTube ichaisa kushambadza mumavhidhiyo ako, uye izvo hazvibatsire kugadzira mufananidzo wehunyanzvi (uye inogona kutotyaira traffic kune vako vanokwikwidza). Muchidimbu: shandisa chete kana iwe usina imwe sarudzo kana kana iwe uchida kudzora chiteshi cheYouTube kuti ushandise kukura vateereri vako nenzira. Mutengo wakasununguka.
Vimeo - Ndiyo # 1 imwe nzira kuYouTube sezvo, kune diki mari, inopa mukana wekugadzirisa akawanda marongero (kunyanya zvakavanzika), chinja marongero emamwe mavhidhiyo muboka, uye pamusoro pezvose, hazviratidze kushambadzira. Zviri nyore kwazvo kugadzirisa nekugadzirisa. Iyo mhinduro yakanaka kana kosi yako yekuendesa chikuva isingakupe iwe isingagumi yemahara yekutambira, zvakare nekuti (seYouTube) inogadzirisa mhando zvinoenderana nebandwidth uye chishandiso chauri kushandisa. Mutengo: yemahara (hurongwa hwehurongwa hunotangira pamadhora manomwe / mwedzi inokurudzirwa)
Tanga Kugadzira Kosi Yako Zvino!
Kana iwe wakanakidzwa neiri rakadzama gwara kune ese akakosha maturusi ekugadzira yakabudirira online kosi (uye izvo zvinobatsira chaizvo vateereri vako), zvipararire. Usamirira zvakare. Edza kugadzira ako epamhepo vhidhiyo makosi nhasi.
kuburitsa: Martech Zone iri kushandisa zvakabatana zvinongedzo muchinyorwa chino.
Tags: gadzikmaikorofoni yemusorolavalier maikorofoniLoomonline courseonline trainingonline vhidhiyo kosipamhepo vhidhiyo ekudzidzisa maturusiopenshotrekodhiscreen recorderchinoyereraSennheisershotcutslr maikorofonivideo editingvhidhiyo yekugadzirisa softwarevideo editorvhidhiyo maikorofonivhidhiyo rekodhikudzidziswa kwevhidhiyoVimeoYouTube